Ungawakha Kanjani Uhlu Lokumaketha Ngcono lwe-imeyili Usebenzisa Imidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
Ukumaketha nge-imeyili bekulokhu kuyindlela edumile yokuthi abathengisi bafinyelele kumakhasimende angaba khona selokhu ukwamukelwa kwale ndlela kusakazwa kabanzi ngawo-1990. Noma kwenziwa amasu amasha njengemidiya yezokuxhumana, ukuthonya, nokumaketha okuqukethwe, i-imeyili isabhekwa njengesebenza kahle kakhulu ngokusho Ucwaningo kwabamakethi abangu-1,800 abenziwa yi-Smart Insights ne-GetResponse.
Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi izindlela ezinhle kakhulu zokumaketha nge-imeyili azivelanga ngobuchwepheshe obusha. Ngenxa yemithombo yezokuxhumana manje kunezindlela ongathuthukisa ngazo kakhulu izinga lohlu lwakho lokumaketha nge-imeyili ngaphezu nje kwefomu lokungena ngaphakathi kuwebhusayithi nokuthenga uhlu lomuntu wesithathu.
Ngezansi kunezindlela ezinhlanu ongasebenzisa ngazo imithombo yezokuxhumana ukuthuthukisa ikhwalithi yohlu lwakho lokuhola lwe-imeyili kusuka kumasu ayisisekelo kuye kwezithuthukile.
Thola Abalandeli Bakho Bezenhlalo Ukuwela Iziteshi
Indlela elula yokulungisa uhlu lwakho lwe-imeyili ngemithombo yezokuxhumana ukukhuthaza abangani bakho bezinkundla zokuxhumana, abalandeli nokuxhumana ukubhalisela uhlu lwakho lwe-imeyili. Lokhu kungabonakala kusobala, kepha izinkampani eziningi azikhathazi ngokulandela umkhondo nokubandakanya imikhondo yazo kuziteshi ezahlukahlukene.
Ungacabangi ukuthi abalandeli bakho bezindaba zenhlalo ikakhulu ngabantu abafanayo nalabo abasohlwini lwakho lwe-imeyili. Futhi, ungalisusi inani labangane bakho bezokuxhumana njengokuntula igunya lokwenza noma lokuthonya isinqumo sokuthengisa. Ngokwami ​​ukubona, akulona iqiniso.
Dala umkhankaso wezokuxhumana oholela ekhasini lokubhalisa kuwebhusayithi yakho. Ungamangala ukuthi mingaki imikhondo yekhwalithi ongabhalisa ngayo ngezingosi ezinjenge-Twitter, Facebook ne-LinkedIn uma uhlala uhlanganyela nabasebenzisi bezenhlalo ezingxoxweni ezithandwayo nangokuqukethwe okungezwe ngenani. Okubaluleke kakhulu, uma laba bantu bexhumana nawe njalo ezinkundleni zokuxhumana maningi amathuba okuthi bavule futhi bafunde ama-imeyili akho.
Thola Ukuhola Okubukeka Okucashile Ngezithameli ze-Facebook
Ngemithombo yezokuxhumana, uhlu lwakho lwamanje lwe-imeyili alukuxhumanisi nalabo bantu abathize. Iphinde ivule idamu elikhulu kakhulu lokuhola okungaba khona kwabantu abafanayo abasebenzisa i-Facebook Isici Sezithameli Ngokwezifiso.
Sebenzisa isici kulula. Ukuphela kokufanele ukwenze ukulayisha noma ukukopisha nokunamathisela ukuhola kohlu lwakho lwe-imeyili kusuka kuspredishithi. Bese unciphisa izithameli zakho ngokwezifiso ngezici ezifanelekayo zokufaneleka, ezifana nobudala nezintshisekelo, bese utshela i-Facebook ukuthi ithole i- izethameli ezibukekayo.
I-Facebook izobe isisebenzisa i-database yayo ukuthola abantu abanezici ezifanayo kubabhalisi bakho bohlu lwe-imeyili. Dala isikhangiso esihlosiwe esizokwenza amalungu ezethameli zakho abukeke ngendlela efanele ukuthi achofoze bese eya ekhasini lokufika kusayithi lakho njengakwithiphu yangaphambilini.
Sebenzisa I-Social Media Ukuthola Amakheli E-imeyili
Ungasebenzisa futhi izibambo zemithombo yezokuxhumana ukuthola amakheli e-imeyili omsebenzi wokuhola usebenzisa inqubo elula, kepha ethe xaxa ethe xaxa, ebizwa nge-data appending.
Idatha efakwa ukumaketha empeleni isebenzisa isevisi yomuntu wesithathu ukugcwalisa izikhala (njengesihloko somsebenzi noma ikheli le-imeyili lomsebenzi) kwimininingwane yakho yokuxhumana yokuhola. Ezinye izinkampani ezigxile kule ndawo, zifaka phakathi iSellhack, Clearbit nePipl (lapho ngisebenza khona).
Isibonelo, ku-Pipl's Search, abasebenzisi bangalayisha uhlu olunamagama abaholi neziphathi zemidiya yezenhlalo futhi balande uhlu olunamakheli e-imeyili angekho afakwe kulo.
Lezi zinsizakalo zokufakwa kwedatha zingasetshenziselwa thola amakheli e-imeyili imikhondo engaba khona etholakala ngokulalela komphakathi. Ukugwema ukuba ugaxekile qiniseka ukuthi unikeza inketho ecacile yokuphuma lapho ufinyelela kulaba bantu.
Qinisekisa Uhlu Lakho Lwe-imeyili Nge noma Ngaphandle Kwemidiya Yezokuxhumana
Kuyiqiniso elingelihle lokumakethwa kwe-imeyili ukuthi amaphesenti athile abantu azobhalisela uhlu lwakho lwe-imeyili besebenzisa amakheli e-imeyili omgunyathi. Ukuthumela ama-imeyili lawa makheli akugcini nje ngokuchitha isikhathi sakho, kepha ama-imeyili amaningi kakhulu azogcina eholele umhlinzeki wakho wesevisi ye-imeyili ukuthi akubize nge-spambot futhi vimba i-akhawunti yakho.
Ungasebenzisa inani lentengo elincintisanayo izinsizakalo zokuqinisekisa i-imeyili ukukhipha ama-imeyili mbumbulu, kufaka phakathi Ungaze unqande, BriteVerify, Isiqinisekisi se-imeyili Esibanzi, Isiqinisekisi se-imeyili futhi I-Qualityan Data Quality.
Kaningi, abantu bazosebenzisa ama-akhawunti we-imeyili noma ikheli abalibheka kaningi kusuka kubahlinzeki abanjengo-Gmail ne-Yahoo bagcwalisa ifomu lokuxhumana. Lokhu kwenza empeleni ukuxhumana nalaba bantu futhi ukufanelekela ukuhola kube nzima kakhulu.
Ngenhlanhla, izinsizakalo ezifana Ikheli Elisha futhi Idatha yeTower kuzokusiza ukuthi uthole amakheli e-imeyili akhethwe amakhasimende nama-imeyili okungenzeka ukuthi aphendule ekunikezweni ngokususelwa ekugxilweni komsebenzi.
Ngenye indlela, ungasebenzisa izibambo zemithombo yezokuxhumana namakheli e-imeyili edlule nge IPipl's People Data API ukuthola amanye amakheli e-imeyili. Idatha yomlando enesitembu sesikhathi kumarekhodi e-imeyili kufanele ikunikeze umbono wokuthi ngabe i-imeyili iyasetshenziswa yini kanye nesihloko somsebenzi ongaba nalo nolunye ulwazi lobungcweti ukukwenza kube ngcono ukuhola.
Ukhiye wokunquma ukuthi yiziphi kulezi zinhlobo ezintathu zezinsizakalo eziqhathanisa amanani abo, amazinga wokufanisa nokuthi ubuchwepheshe babo bungena kanjani ekwakhiweni nenjongo yohlu lwakho lokuhola.
Inzuzo Elula Yokuncintisana
Okuthathwayo okuyinhloko ukuthi kufanelekile ukuthola ubuciko ekusebenziseni ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ikhwalithi yohlu lwakho lokukhangisa nge-imeyili namazinga ezingxoxo zabo. Okunye okutholakele kulolo cwaningo luka-2015 lwe-Smart Insights ukuthi iningi elincane kuphela (ama-53%) labakhangisi abasebenzisa i-lead-gen kanye namathuluzi wokwakha uhlu ukwenza ngcono ubukhulu nokusebenza kokufinyelela kwabo okuholayo. Bambalwa kakhulu abathengisi (abangaphansi kwama-25%) abasebenzisa amasu omphakathi noma wokuqukethwe ukwakha imikhondo yekhwalithi. Zinike ithuba lokuncintisana. Ukuthatha leso sinyathelo esingeziwe kungaba lula impela.
Tags: BriteVerifyi-imeyili eqinisekisayo ngobuningiama-akhawunti we-imeyiliisiqinisekisi se-imeyiliukuqinisekiswa kwe-imeyiliikhwalithi yedatha ye-Experianikheli elishai-piplidatha ye-pipl apisocial mediaidatha yombhoshongo
Kufanele Uyibekephi Imizamo Yakho Yokumaketha ngo-2020?
Ngo-Apr 28, i-2017 ku-6: 53 AM
Sawubona, ngiyabonga ngokwabelana ngolwazi oluwusizo kakhulu mayelana ne-imeyili Marketing. Ngijabule ukubona amanye amabhulogi akho mayelana nensizakalo ye-imeyili.